ဂျိုးဇက် ဂိုဘဲလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
"Joseph Goebbels" နာဇီအစိုးရ၏ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဝန်ကြီး (၁၉၃၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း)
အမည်။။ ဂျိုးဇက် ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ
မွေးနေ ့။။ ၁၈၈၇ ခု အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်
မွေးရပ်။။ ရိုက်ဒ်တ်၊ ရိုင်းလန်းဒ် (Rheydt/ Rheinland)
သေဆုံး။။ ၁၉၄၅ ခု မေလ ၁ ရက်နေ ့တွင် နေထိုင်ရာ ဘာလင်မြို ့၌ မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ခဲ့သည်။
ဂျိုးဇက် ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ် သည် ဘာသာရေး အလွန်ကိုင်းရှိုင်းသော မိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်သည်။ သူသည် ခြေတစ်ဘက်ခွင်နေခြင်းကြောင့် ငယ်စဉ်က ကျောင်းတွင် မကြာခဏ လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ အတန်းဖော်များ၏ အနိုင်ကျင့်မှုများကို ခါးဆီးခံနေရသော်လည်း ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ် သည် အတန်းထဲတွင် အတော်ဆုံးကျောင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်တွင် ဂျာမန်ဘာသာနှင့်စာပေကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ပါရဂူဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် သတင်းစာဆရာနှင့် စာရေးခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပေ။ သူ၏ဘဝသည်လည်း ဂျူးလူမျိုးများကို မုန်းတီးနာကြည်းနေသော ဟစ်တလာကဲ့သို ့ပင် အစပျိုးခဲ့သည်။ ဂရေဂိုဝါ ရှတရတ်ဆာ "Gregor Strasser" ၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှစ၍ နိုင်ငံရေးလောကနှင့် ထိတွေ ့ခွင့်ရခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများကိုမူ ၁၉၂၄ ခုနှစ် ဟစ်တလာ ဦးဆောင်မှုအောက်ရှိ NSDAP (ဂျာမန် အမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ် အလုပ်သမားများ ပါတီ) သို ့ဝင်ရောက်ပြီးမှသာလက်တွေ့ပါဝင် လုပ်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ ထက်မြက်မှု နှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်တို ့ကြောင့် ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် နယ်ပိုင်ရာထူးနှင့် ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်တော်အမတ်ရာထူးတို ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ် သည် ဂျူးလူမျိုးများနှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို ရှုံ ့ချပုတ်ခတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရင်း လူသိများလာခဲ့သည်။
၁၉၃ဝခုနှစ်မှစ၍ ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နာဇီပါတီ အာဏာရလာပြီးနောက် ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင်တော့ သူသည် သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် စည်းရုံးရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာလေတော့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဖွဲ ့စည်းတည်ထောင်သော နိုင်ငံတော်၏ ယဉ်ကျေးမှုပြန် ့ပွားရေး အဖွဲ ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယင်းရာထူးများကို ပိုင်ဆိုင်နေသည့်တလျောက် သူအပိုင်ရသော မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှတဆင့် သတင်းမှား သတင်းလွဲများထုတ်လွှင့်ကာ ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ဓာတ်များကို အမှောင်ဖုံး၍ အလင်းပျောက်ကွယ်စေရန် ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသ၍ ကြိုးပမ်းလေတော့သည်။
ထိုသို့ဖြင့် ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ်သည် အောင်မြင်ကြော်ကြားသော "နာဇီဝါဒဖြန့်သမား" တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရေဒီယိုအသံလွင့်ဌာန ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ နာဇီတို့၏ လုပ်ကြံထားသော ကောင်းသတင်းများနှင့် လူမျိုးစုအချင်ချင်း သွေးကွဲစေရေးဝါဒများကို အစဉ်အဆက်ထုတ်လွှင့်ရင်း "အာဏာရှင်စနစ် အဓွန့်ရှည်ရေး" ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်နေလေသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ချိန်တွင်တော့ ရေဒီယိုအစီအစဉ်သစ်များ အနေဖြင့် "အရေးပေါ်သတင်းများ" အစီအစဉ်နှင် "တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းစုစည်းချက်" များကို ထပ်မံ တိုးချဲ့ခဲ့လေတော့သည်။ ဘာလင်မြို့ အားကစားကွင်းကြီးတွင် ၁၉၄၃-ခုနှစ်၌ ဟောပြောခဲ့သော သူ၏မိန့်ခွန်းအရ "အလုံးစုံသော စစ်" ကို ဦးတည်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ပါတီကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူ အများစုမှာ ရေဒီယိုမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်သော ထိုသတင်းကို ကြားရချိန်ဝယ် အားရကြေနပ်စွာ ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ကြတော့သည်။
၁၉၄၄-ခု ဩဂုတ်လမှစ၍ ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ်ကို "စစ်အတွင်း ပါဝင်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အထွေထွေအမိန့်အာဏာ" ကိုပေးအပ်လိုက်သောအခါ သူ သည် တတိယ ဂျာမဏီနိုင်ငံတော်တွင် အရေးအပါဆုံး လူပုဂ္ဇိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားလေတော့သည်။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ်သည် ရှေ့တန်းရောက် ရဲဘော်များ၏ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးနှင့် တိုင်းပြည်တွင်းမှ အပစ်မဲ့ လူငယ်လူရွယ်များကို စစ်အတွင်းသို့ သိမ်းသွင်းစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အလူးအလဲရှုံးနိမ့် နေသော ဂျာမန်စစ်တပ်ကြီး နလန် မထူနိုင်တော့မည်ကို ရိမ်စားမိသောအခါ ဂြိုဟ်ဘယ်လ်စ်သည် သူ၏မိသားစုကို ခေါ်ကာ ဟစ်တလာ၏မြေအောက်ခန်းအတွင်းသို့ လိုက်လံပုန်းခိုလေသည်။ ဧပြီလ ၂၉ ရက် တွင် ဟစ်တလာက သူ့ကို ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် သူသည် သူ၏ "ခေါင်းဆောင်" ရာထူးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ မစံစားလိုက်ရ။
၁၉၅၄ခု မေလ ၁ရက်နေ့တွင် သူ၏ကလေးငယ်များကို အဆိပ်ကြွေးသတ်ပစ်လိုက်ပြီး သူနှင့်သူ၏ ဇနီးကိုယ်တိုင်တို့သည်လည်း ဘာလင်မြို့နန်းတော်ကြီး၏ အတွင်းတစ်နေရာတွင်ပင် မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်လိုက်ကြလေတော့သည်။
"http://www.nrw2000.de/koepfe/kopf.htm Archived9April 2009 at the Wayback Machine." မှ Joseph Goebbels အကြောင်းကို မှီငြမ်းရေးသားပါသည်။
"http://www.nz-nothanks.blogspot.com Archived6October 2018 at the Wayback Machine." မှကူးယူဖော်ပြသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုးဇက်_ဂိုဘဲလ်&oldid=704944" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။